राप्रपा महाधिवेशन : नयाँ कार्यसमिति चुन्न शनिबार मतदान हुने - समाचार - कान्तिपुर समाचार
राप्रपा महाधिवेशन : नयाँ कार्यसमिति चुन्न शनिबार मतदान हुने
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को महाधिवेशन सुरु भएको दोस्रो दिन प्रतिनिधिको विवाद टुंगिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छ । जिल्लाले पठाएको भन्दा फरक व्यक्तिको नाम प्रतिनिधिमा समावेश गरिएको भन्दै विरोध भएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले छानबिन समिति बनाएको थियो ।
सर्लाहीबाट दुईवटा समूहमा प्रतिनिधि पठाइएको, ललितपुरबाट तोकिएको भन्दा दुई जना प्रतिनिधिको नाम थपिएको र भक्तपुरमा निर्वाचन नै नगरी भागबन्डामा प्रतिनिधि चयन गरिएपछि विवाद भएको थियो । भक्तपुरमा प्रतिनिधि छनोटको निर्वाचन नहुँदा नगर, प्रदेश, क्षेत्र र जिल्लाका प्रतिनिधि आउनै सकेनन् ।
‘केही जिल्लाको प्रतिनिधिमा विवाद देखिएपछि हामीले ७७ वटै जिल्लामा चयन भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम रुजु गर्न छानबिन समिति बनाएका थियौं,’ निर्वाचन अधिकृत राजु बस्नेतले भने । समितिले प्रतिनिधि विवाद टुंग्याउन सचिवालय प्रमुख ध्रुवबहादुर प्रधान, तोरण गुरुङ, जनक प्याकुरेल, श्याम शाही, पुस्कर कार्की, श्यामशरण पाठकसहितको टोली बनाएको थियो । टोलीले टुंग्याएको नामलाई केन्द्रीय निर्वाचन समितिले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको हो । ‘बुधबार बिहानै टाँस्नुपर्ने मतदाता नामावली विवादका कारण टाँस्न सकिएको थिएन । छानबिनपछि हामीले पाएको नामावली सार्वजनिक गरेका छौं,’ बस्नेतले भने । मतदाता नामावलीमाथिको दाबी विरोध शुक्रबार बिहान साढे सात बजेबाट सुरु हुने उनले बताए । अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर शुक्रबार साढे ११ देखि साढे १ बजेसम्म उम्मेदवारी दिन सकिने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
पूर्वानिर्धारित तालिकाअनुसार बुधबार मतदाता नामावली प्रकाशन, बिहीबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता र शुक्रबार मतदान हुने मिति तोकिएको थियो । ‘अब शुक्रबार उम्मेवारीको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेर शनिबार मात्रै निर्वाचन हुनेछ,’ बस्नेतले भने । अध्यक्षबाहेक ४ उपाध्यक्ष, ३ महामन्त्री र १ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि विद्युतीय मेसिनबाट मतदान हुने उनले बताए । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मेसिनमा उम्मेवारको नाम सेटिङ गर्न कम्तीमा २० घण्टा समय लाग्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।
‘केन्द्रीय सदस्यहरू विभिन्न क्षेत्र, समूहबाट छनोट गर्नुपर्ने भएकाले मतपत्र बनाउँदा मतदाता झुक्किन सक्ने भएकाले अध्यक्षबाहेकका पदका लागि विद्युतीय मतदान गर्न लागिएको हो,’ बस्नेतले भने, ‘अध्यक्षको भने सहज हुने भएकाले मतपत्रमै मतदान गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’ निर्वाचनका लागि १ सय वटा भोटिङ मेसिन महाधिवेशन स्थलमा ल्याइनेछ । यसमध्ये ९१ वटामा एकै पटक मतदान गर्न सकिने बस्नेतले बताए । ५ वटा विकल्पका रूपमा राखिने जनाइएको छ । ४ वटा मेसिनमा भने मतदाता शिक्षाका लागि प्रयोग गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
अध्यक्षको उम्मेदवारी दस्तुर एक लाख
राप्रपाको उम्मेदवार बन्न कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । पार्टीको निर्णयअनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तोकिएको शुल्क लिएर शुक्रबार उम्मेदवारको मनोनयन गर्दै छ । निर्वाचन अधिकृत राजु बस्नेतका अनुसार अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले एक लाख रुपैयाँ दस्तुत तिर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै केन्द्रीय उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ७५ हजार, महामन्त्रीले ५० हजार र केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहनेले १५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महाधिवेशनले १ सय ९४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ । उम्मेदवारी दर्ताबाट मात्रै पार्टीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको महाधिवेशन स्रोत व्यवस्थापन समितिका एक सदस्यले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०६:४२
मंसिर १७, २०७८ प्रदेश ब्युरो
जनकपुर — सहमति गर्ने र विवाद मिलाउन भन्दै तोकिएको निर्वाचन तालिका सार्दै आफूनिकट प्रतिनिधि छनोटमा नेताहरूले बलजफ्ती गरिरहेकाले प्रदेश २ मा कांग्रेस अधिवेशन अनिश्चित भएको छ । क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण प्रदेश २ का ८ जिल्लामा एक महिना ढिलो वडा अधिवेशन थालिएको थियो ।
क्षेत्रीय अधिवेशनको अन्तिम परिणाम नआउँदै जनकपुरको तिरहुतिया गाँछीमा बिहीबार प्रदेश २ को अधिवेशन सुरु भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल उद्घाटन गरेको उद्घाटनमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महेन्द्र यादव, कल्याण गुरुङलगायतको उपस्थिति थियो । प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी विवाद सर्लाहीमा छ । तेस्रोपटक तोकिएका निर्वाचन अधिकृत भरत राउत बिहीबार काठमाडौं फर्किएका छन् । प्रहरीले जिल्ला सचिव उपेन्द्र कुशवाहको रोहवरमा उनी बस्ने कोठा सिल गरेको छ । राउतले पनि वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
बलरा नगरपालिका–८ अचलगढ र ९ नम्बर वडा गडहियामा वडा अधिवेशनका क्रममा गोली चलेको थियो । अचलगढमा सांसद अमरेशकुमार सिंह र प्रदेश २ का मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंह समूहबीच विवाद हुँदा मन्त्रीका अंगरक्षकले गोली चलाएका थिए । सर्लाहीका ४ निर्वाचन क्षेत्रका १० वडामा संस्थापन र इतर समूहबीच विवाद छ । ३ वटा वडामा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सर्लाही क्षेत्र नं. ४ को बलरा नगरपालिका–८ र ९ नम्बर वडामा चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । क्षेत्र नं. ३ स्थित कविलासी नगरपालिका–४ मा पनि दुई पक्षबीच विवादका कारण चुनावी प्रक्रिया रोकिएको छ । क्षेत्र नं. ४ मा नेताद्वय सिंहबीच टकराव छ ।
सर्लाही क्षेत्र ४ कै कारण कांग्रेस वडा अधिवेशनमै अल्झिरहेको छ । क्षेत्र नं. ३ को कविलासी नगरपालिका–४ मा पनि संस्थापन र इतरपक्षबीच नवीकरणमा छुट भएका ७ जनाको सदस्यता विवाद छ । क्षेत्र नं. १ र २ को ५ वटा वडामा पनि विवाद देखिएको छ । इतरपक्षका नेता तथा जिल्लाका पूर्वसभापति लक्ष्मण रायले कतिपय वडामा सभापतिले घरमै बसेर प्रमाणपत्र बाँड्न लगाएको आरोप लगाएका छन् । जिल्ला सभापति नागेन्द्रकुमार रायले भने पूर्वसभापति लक्ष्मण रायले केही वडामा जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाए ।
चार–चार क्षेत्र भएका धनुषा र महोत्तरीमा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । बारामा बिहीबार क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु भएको हो । संस्थापन र इतरपक्षबीच वडा तहमा चुनावमार्फत नेतृत्व छान्ने कि सर्वसम्मत, अधिवेशनका बेला क्रियाशील सदस्यता थप, वडा तहको निर्वाचनमा भएको धाँधली र कुटाकुटलगायतका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि बारामा अधिवेशन तोकिएको मितिभन्दा पछाडि धकेलिएको त्यहाँका निर्वाचन अधिकृत राजन दाहालले बताए ।
प्रसौनी गाउँपालिकाको वडा–५, सिम्रौनगढ र पचरौता नगरपालिकाको क्रमशः वडा–३ र ५ मा भएको निर्वाचनमा धाँधली र सदस्यलाई जानकारी नदिई निर्वाचन गरिएको कारण देखाउँदै त्यसलाई बदर गर्दै दोस्रोपटक निर्वाचन गरिएको थियो । सिम्रौनगढ वडा नम्बर ३ को निर्वाचन वडामा कलैयास्थित पार्टी कार्यालयमा गरिएको थियो । यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को अधिवेशन आदर्श कोतवालस्थित विद्यालयमा तोकिएकोमा धाँधली हुन सक्ने सिटौला समूहको आरोपपछि कलैयास्थित पन्नादेवी माविमा भएको छ ।
बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को निर्वाचन प्रसौनी र ३ को निर्वाचन कलैयामा भइरहेको छ । क्षेत्र नम्बर २ को क्षेत्रीय अधिवेशन स्थगित भएको दाहालले बताए । रौतहटमा पनि बिहीबार मात्रै कांग्रेसले क्षेत्रीय, प्रदेश र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट टुंग्याएको छ । चार क्षेत्रमध्ये ३ वटामा सर्वसम्मत भएको छ । क्षेत्र नम्बर ४ मा भने सहमति गरे पनि बुधबार निर्वाचन भएको थियो । रौतहटका सभापति कृष्णा यादवले आफ्नो क्षेत्र नम्बर १ मा क्षेत्रीय सभापतिमा देउवानिकट श्रीराम यादवलाई निर्विरोध गराएका छन् ।
सांसद मोहम्मद आफताब आलमको पकड रहेको क्षेत्र २ मा पनि उनीनिकट शेख फैजुल्लाह क्षेत्रीय सभापतिमा निर्विरोध भएका छन् । आलम अहिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल छन् । रौतहटको क्षेत्र नम्बर ४ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा देउवा र पौडेल पक्षले भागबन्डामा सहमति गरे पनि कार्यकर्ताले नमानेपछि बुधबार क्षेत्रीय, प्रदेश र महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन भएको छ । सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ मा बुधबार मतदान भएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा मतदान प्रक्रियामा विवाद हुँदा क्षेत्रीय अधिवेशन हुन सकेको छैन । सिरहाका सबै क्षेत्रमा अधिवेशन सकिएको छ । पर्सामा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०६:४०